AHRN’s projects, clinical and blood testing training for nurses – AHRN-Myanmar
AHRN’s projects, clinical and blood testing training for nurses
By AHRN IT — In Uncategorized	— 25/07/2018
In order to improve the capacity and quality of medical staff working in the front line of AHRN’s projects, clinical and blood testing training for nurses has been conducted from 14/06/2018 to 16/06/2018 in Mandalay. 33 Nurses, Nurse-Counselors, Health Assistant and Nurse in charge from all AHRN projects attend the training. Dr. Aung Yu Naing, Health Director provided the topics on HIV and TB Nursing care; Dr. Kyaw Thu Hein, Program Coordinator (Health Affairs) on cold chain management, Hepatitis B, C, MMT and Drug addiction; Ma Lea Lea Cho (Laboratory Coordinator) provided the training on blood testings related SOPs, quality control and documentation.
AHRN ၏ ရှေ့တန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ကိုင်နိုင်မှုစွမ်းရည် နှင့် အရည် အသွေးတိုးတက်လာစေရန်အတွက် သူနာပြုများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုသမှုဆိုင်ရာ နှင့် သွေးစစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာ သင်တန်း တစ်ခုကို မန္တလေးမြို့တွင် ၁၄၊၀၆၊၂၀၁၈ မှ ၁၆၊၀၆၊၂၀၁၈ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ AHRN ၏ စီမံချက်အသီးသီးမှ သူနာပြုများ၊ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးသော သူနာပြုများ၊ ကျန်းမာရေးမှူး နှင့် သူနာပြု တာဝန်ခံ ၃၃ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာ အောင်ယုနိုင် (ကျန်းမာရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး) မှ ခုခံကျ ရောဂါအကြောင်းနှင့် တီဘီရောဂါအကြောင်းကို လည်းကောင်း၊ ဒေါက်တာ ကျော်သူဟိန်း (စီမံကိန်း ညှိနှိုင်းရေးမှူး (ကျန်းမာ​ရေးဆိုင်​ရာ)) မှ အအေးခန်းဆေးပစ္စည်း သိုလှောင်မှုအကြောင်း၊ အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီပိုး စီပိုး အကြောင်း၊ မက်သဒုန်း ဆေးအကြောင်းနှင့် မူးယစ်ဆေးစွဲလန်းခြင်းအကြောင်းတို့ကို လည်းကောင်း၊ မလဲ့လဲ့ချို (ဓာတ်ခွဲခန်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူး) မှာ သွေးစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း အကြောင်းတို့ကိုလည်းကောင်း သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။